Khabar Kantipur » फोक्सो बिरामीका लागि तामा अमृतसमान हुन्छ, फाइदाहरु जान्नुहोस्
हाम्रा पाकघरमा असार महीनाको छेकछाकतिर सब्जीको रूपमा पाक्ने परिकारमध्ये एउटा हो बाँसको तामा । अंग्रेजीमा बेम्बो शूट भनिने यो परिकारलाई हामी तामा भनेर चिन्छौं ।
हामी यसो त धेरैप्रकारका बाँसको तामा सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्दछौं, तरै पनि प्रचलित रूपमा चोयाबाँस वा जुन बाँसबाट चोया बनाउन सकिन्छ ।
त्यस्ता बाँसको तामा खानेगर्छौं भने परेङ (सानो प्रजातिको बाँस, जसबाट चित्रा बनाइन्छ) को तामा पनि हामी सब्जीको रूपमा खान्छौं । ठूला बाँसको तामाभन्दा साना प्रजातिका बाँसको तामा खानको निम्ति निक्कै स्वादिष्ट हुन्छ ।
यसलाई परिकारको रूपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अचारको रूपमा राखेर धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्नसकिन्छ ।
तामाको मेसो (अमिलो अचार) पनि धेरै प्रचलित अचार हो । तर आज यहाँ तामाको सब्जीबाट के-के स्वास्थ्यवर्धक लाभ पुग्दछ र कसरी बनाइन्छ भन्ने चर्चा गरिन्छ। बाँस अचम्मको उद्भिद हो ।
‘ए हैन भनी कलिलो तामा लाई सोध रामलाई’– यो गीत एक जमानामा निकै लोक प्रिय गीत थियो । हो यो गीतमा भने जस्तै बाँसको कलिलो भागलाई नै तामा भन्ने गरिन्छ । प्रायगरी तामालाई तरकारी, अचार बनाएर खाने गरिन्छ ।
बाँसको कलिलो टुसा र भागलाई तामाको रुपमा विभिन्न तरिकाले तपाई हामीले खाएकै छौँ, तर यसको फाइदा के कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी सबैलाई नहुन सक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बाँसको तामा निकै उपयोगी चिज हो ।
तामामा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन ई, नियासिन, रिबोफ्लाभिन, थियामिन र फोलेट लगायतका तत्व पाइन्छन् । त्यस्तै यसमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फोस्फरस, पोटासियम, कप्पर, जिंक, सोडियम, म्यागानिज र आइरन लगायतका खनिज तत्वहरु समेत पाइन्छन् ।
तामाको नाम सुन्ने वित्तिकै धेरेको मुखमा मिठो पानी आउने गर्छ, तामाको अचार तर तरकारीले धेरैको मन लोभ्याएको हुन्छ । तर तामालाई धेरै परिकारको रुपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अचारको रूपमा राखेर धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।हामीले प्राचीन कालदेखि सब्जीको रूपमा खाँदै आएको तामा त साइलेण्ट डाक्टर अथवा ( अबोला वैद्य ) पो रहेछ त ।
तिनीहरूले बाँसको टुसामाथि अनुसन्धान गरेपछि के-के पाए त भन्ने कुरालाई यहाँ छोटकरीमा भए पनि राख्नैपर्छ, जुन कुराले यसको स्वास्थ्यपरक लाभहरूको बारेमा बताउँछ बाँसको तामामा कम क्यालोरीका तत्त्वहरू हुन्छन्
जुन कुरालाई हामी ‘छैन’को बराबर ठान्न सक्छौं । त्यस्तै गरी यसमा अत्यन्तै कम कार्बोहाइड्रेट्स तत्त्वहरू हुन्छ यसो हुनाले यो अब मधुमेहका रोगीहरूलाई पनि जच्ने परिकार भयो । अर्को्तिर, अति न्युन क्यालोरी हुनाको कारण यसले शरीरको ‘फ्याट लस’ वा बोसो घटाउन ९सोझो अर्थमा ओजन कम गर्न०मा ठूलो सहयोग र्पुयाउँछ ।
यति कम चिनी हुने खाद्य परिकार अरु लगभग कुनै छैन ।यसमा फ्याट अनि सुगर पनि नगण्य रूपमा हुने हुनाले यसले कोलेस्ट्रोलको एलडीएल स्तर, लिपिड्स र बाउल फँक्शन कम गर्दछ, त्यसैले यो खाद्य परिकारलाई मुटुको स्वास्थ्यमैत्री खाद्य भनिएको छ ।
त्यस्तै गरी तामामा प्रोटिन भने उपयुक्त हुन्छ जसमा शरीरलाई चाहिने एमिनो एसिडको सबै प्रकारका मात्रा यथोचित हुन्छ जसको कारण यसले स्वास-प्रस्वासका कतिपय समस्याहरू कम गर्नमा वा निको पार्नमा ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
यदि सबै गुणयुक्त कुनै पनि स्वस्थकर सब्जीको सिफारिस गर्ने हो भने तामा एक नम्बरमा आउने भयो। हामीले प्राचीन कालदेखि सब्जीको रूपमा खाँदै आएको यो तामा यति गुणकारी छ भन्ने कुरा हालै मात्र सार्वजनिक भयो र अहिले एसियालीमुलुक छोड़ेर पाश्चात्य मुलुकहरूमा पनि यो सब्जी लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसको अमिल्याइएको अचारहरू भने सबैको निम्ति सही नजच्ने हुँदा सबैले यस्ता अचारको सेवन नगरेको राम्रो हुन्छ। हड्डी सम्बन्धी कतिपय रोगमा यो सब्जी गुणकारी हुँदैन, यद्यपि हड्डीको विकास तथा निर्माणमा तामामा हुने क्याल्सियमले सहयोग र्पुयाउँछ ।
कसरी तयार गर्ने त बाँसको तामा ?
तामा तयार पार्ने विधि
बाँसको तामालाई गुन्द्रुक जसरी नै पकाउने गरिन्छ । त्यसका लागि पहिला बाँसको कलिलो मुन्टा भाँचेर ल्याई स-साना टुक्रा बनाउनुपर्छ । त्यसलााई केहीबेर घाममा सुकाएर सुकाएर बेसार मोल्ने र सफा माटोको भाडो या डिब्बामा हावा नछिर्ने गरी बन्द गरि राख्नुपर्छ । त्यसलाई जति लामो समय राख्यो त्यति नै अम्लिएपन बढ्दै जान्छ ।
तामालाई पलास्टिकमा बाधेर जमिनमुनि महिनौसम्म गाड्ने परम्परागत तरिका पनि छ । तर, ब्याबसायिक रुपमा तामा उत्पादन गर्ने हरुले भने एयर टाइट बोटलमा भिनेगर र तामा राखी विक्रीको लागि राखेका हुन्छन् ।
नेपालमा तामाको परिकार सिमित छन् । नेपालमा आलु बोडी तामाको तरकारी निकै प्रचलित छ । तामाको अमिलो अचार अर्थात तामाको मेसो पनि त्यतिकै लोकपि्रय छ ।
विदेशीहरुले यसलाई थुप्रै परिकारको प्रयोजनामा प्रयोग गर्छन् । खानाको सुरुवाती समयमा एप्पीटाइजर सलादको रुपमा तामालाई लिने गरिन्छ । तामाको सुप पनि विभिन्न थरीका तयार पारिन्छ । थाइल्यान्डमा तोम यम कोङग, चीनमा हट एन्ड सावरमा तामा अनिवार्य हुन्छ । चीनमा त तामाको २५० भन्दा बढी परिकार तयार हुन्छ ।
मासुमा तामा राखेर पकाउँदा पनि निकै स्वादिष्ट हुन्छ । बासको टुसालाई ताजै तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
– बाँसको तामामा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा अत्यन्तै कम हुन्छ । जसकारण मधुमेह रोगीको लागि यसका परिकार निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
– बाँसको तामा क्यालोरी पनि न्युन हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउन चाहनेहरुको लागि पनि यसले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
– पाचन प्रकियामा समस्या छ भने पनि नियमित रुपमा तामाको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । बिसाबमा सक्रमण भएका बिरामीलाई पनि तामाले औषधीको काम गर्छ ।
– गर्भबती महिलालाई पनि तामा निकै स्वस्थकर मानिन्छ । यस्ता महिनालाई गर्भवतिको अन्तिम महिलामा तामा खुवाउने गरिन्छ ।
– यसले ग्यास्टि्रक र अल्सरलाई निको पार्नमा भुमिका निर्वाह गर्छ । नियमित तामाको सेवनले क्यानसरको सम्भावनालाईसमेत कम गर्छ ।
– यो मुटु रोग, रक्तचाप, अत्याधिक कोलेस्ट्रोल, आन्तरिक घाउचोटको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नका लािग तामाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
– फोक्सो सम्बन्धी बिरामीको लागि तामा अमृतसमान मानिन्छ । स्वासप्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित विरामीलाई नियमित रुपमा तामा सेवन गर्दा ठूलो राहत दिन्छ ।
प्रशिद्ध काहाँ कहाँ ?
– अन्तराष्ट्रिय बजारमा ‘बेम्बो शुट’को नामले बाँसको तामा विक्री गरिन्छ । क्यानमा प्याकिङ गरेको यस्तो बम्बो सुट निकै महंगो हुन्छ ।
– बिश्वप्रशिद्ध थाई सुप ‘तोमयाम कोङ’मा तामा अनिवार्य हुन्छ । तामे, भालु, चोय बास या निगालोको तामा यसमा प्रयोग गरिन्छ ।
– जापानिजहरुले बाँसलाई ‘किङ अफ ग्रास’कै नाम दिएर पाकशिक्षामा राखेका छन् । जहाँ बाँस र तामाको फाइदालाई पढाईन्छ ।
– चीनमा पनि बाँसको तामा निकै प्रचलित छ । त्यहाँ त बासको तामा मात्र नभै पात पनि बिभिन्न हर्बल-टिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
बाँसलाई ‘घाँसको राजा पनि भन्ने गरिन्छ । बाँसको कलिलो भागलाई नै तामा भन्ने गरिन्छ । एसियामा यो प्रचलित सब्जी तामालाई हामी अचार वा सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ । तामा एउटा स्वथ्यकर, पूर्ण र गुणकारी सब्जी हो । यसमा भिटामिन बि, भिटामिन ई र ए, नियासिन, रिबोफ्लाभिन, थियामिन र फोलेटहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी खनिज तत्त्वहरूमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, सोडियम, फोस्फरस, पोटासियम, कप्पर, म्यागानिज र आइरन हुन्छ ।
– यसमा प्रोटिन मात्रा भरपुर हुने भएकाले शरीरको प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ ।
– तामाको सब्जी खनाले पाचन समस्यामाका लागि लाभदायिक हुन्छ ।
– फोक्सो सम्बन्धी समस्या होस् या रुघा खोकी त्यसको नियन्त्रणको निम्ति तामा निकै लाभदायिक हुन्छ ।
– यसमा अत्यन्तै कम कार्बोहाइड्रेट्स तत्त्वहरू हुन्छ, त्यसैले मधुमेहका रोगीहरूका लागि तामा निकै लाभदायिक हुन्छ ।
– उच्च रक्तचाप भएकालाई तामा उपयुक्त सब्जी हो ।
– पेटको दुखाइका साथै अल्सर तथा आन्द्राका घाउहरू कम हुन तामाले सहयोग पुग्दछ ।
– यसमा क्यालोरी नहुनाले ऊर्जा दहनको अतिरिक्त परिश्रम अथवा कसरत केही गर्न आवश्यक हुँदैन ।
-यो मुटुको निम्ति मैत्री खाद्य हो । यसले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ।
– यसमा फ्याट र सुगर अति नै कम हुनाले यसले कोलेस्ट्रोलको एलडीएल स्तर, लिपिडस् र बाउल फँक्शन कम गर्दछ
-तामामा रहेको फाइटोस्टेरोल्सहरू जस्तै क्लोरोफिल, एमिलेज र फ्लोभिनहरूले शरीरमा क्यान्सर विकासलाई नष्ट गर्दछ ।
– तामाले पिसाबघरका कतिपय समस्याहरू लाई निको पार्न औषधिको काम गर्छ।
-तामामा प्रोटिन उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा श्वास-प्रस्वासका कतिपय समस्याहरू कम गर्नमा वा निको पार्नमा ठुलो भूमिका खेल्दछ ।
– झाडा-पखाला लाग्दा र पेटमा ग्यास बढेर पेट फुल्दा तामाको झोल बनाएर खाँदा औषधीको काम गर्दछ ।
-यसमा अति न्यून क्यालोरी हुनाको कारण यसले शरीरको ‘फ्याट लस’ वा बोसो घटाउन (सोझो अर्थमा ओजन कम गर्न) मा ठुलो सहयोग पुर्‍याउँछ।
तामालाई लामो समयसम्म बोतलमा राखेर अचारको रुपमा प्रयोग गन सकिन्छ । प्राचिनकालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको तामाको सब्जलीलाई डाक्टर तथा वैद्ययहरले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँसको टुँसालाई सब्जीको रुपमा प्रयोग गर्ने भएपछि गरिएको अनुसन्धनबाट थुप्रै फाइदाहरु पत्ता लागेको छ । तामामा कम क्यालोरीका तत्वहरु पाइने गर्छ ।
त्यस्तै तामामा अत्यन्तै कम कार्बोहाड्रेट पाइन्छ । यो मधुमेहका रोगीहरुको लागि पनि राम्रो परिकारको रुपमा देखिएको छ । क्यालोरी कम हुने भएकाले यसले बोसो घटाउन सहयोग गर्छ । यसमा चिनीको मात्र कम हुने भएकाले सुगर हुनेले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । कोलेस्ट्रोल एलडीएल स्तर, लिपिड्स र बाउल, फँक्शन कम गर्छ , अर्को तर्फ तामालाई स्वास्थ्यमैत्री खाद्यय पनि भनिन्छ ।
तामामा उपयुक्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । जसले शरिरलाई चाहिने एमिनो एसिडको सबै प्रकारको यथोचित हुन्छ । त्यसकारण यसले स्वास प्रस्वासको समस्या भएका व्यत्तिलाई निको पार्छ । प्राचिन कालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको कारण तामालाई गुणकारी तरकारीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय तामाको तरकारी लोकप्रिय बन्दै गएको छ । त्यतिमात्रै हैन् तामालाई अमिलो बनाएर अचारको रुपमा पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । तामामा क्याल्सियमको मात्रा बढी हुने भएकाले सब्जीको रुपमा प्रयोग गर्दा हड्डी सम्बन्धी विभिन्न किसिमका रोगहरुलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
प्रकाशित मिति May 13, 2019